October 11, 2020 - Achawlaymyar
အရပ်ငါးပေမပြည့်တပြည့် မိန်းကလေးတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားသာချက်(၇)မျိုး…
October 11, 2020 by Achawlaymyar
အရပ်ငါးပေမပြည့်တပြည့် မိန်းကလေးတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားသာချက်(၇)မျိုး… အရပ်ငါးပေ မပြည့် တပြည့်နဲ့ ကောင်မလေးတွေလောက် ချစ်စရာကောင်းတာ မရှိဘူးလို့ပြောရင် ငြင်းမှာလား…၊ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပဲငြင်းငြင်း သူတို့လေးတွေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အားသာ ချက်လေးတွေ ကတော့ ဒီလိုလေးတွေ ရှိပါ တယ်။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော် …။ (၁) ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ပိုနုတယ်” ရွယ်တူတွေ ကသာ အသက်တွေ ကြီးသွားတာ ကိုယ်တွေ ကတော့ တက်လာ သမျှ ကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်လို့ရနေတုန်း ပါပဲ …။ (၂) အ၀တ်အစားအတွက် အကုန်အကျ သက်သာတယ်” အ၀တ် အစားဝယ်တဲ့ အခါ small size ကဈေးအနည်း ဆုံးဖြစ်သလို၊ ချုပ်ဝတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ပိတ်စတွေအများကြီး မ … Read more
အင်ျဂါ သားသမီးတို့၏ စိတျနစေိတျထား….
အင်ျဂါ သားသမီးတို့၏ စိတျနစေိတျထား အင်ျဂါတှဟော အပွငျပနျး သဏ်ဍနျတညျငွိမျအေးဆေးစှာ နဲ့နတေတျကွပမေဲ့ အငျမတနျ မှဒေါသကွီးတဲ့ နနေ့ာမျတှဖွေဈ ကွတယျ မဟုတျရငျ မခံခငျြ ကွဘူး။ ဒေါသဖွဈရငျ အပွငျမှာပေါကျကှဲ ကွတာထကျ ပါးစပျက ပူညံပူညံ နဲ့ရရှေတျနေ တတျကွ တယျလူတှေ အပျေါ ဖျောရှစှောနဲ့ ခငျမငျတတျပါတယျ ဝတ်တရားပကျြကှကျမိ ရငျလညျး အပွနျပွနျ အလှနျလှနျတှေးပူနေ တတျကွ တယျ။ မိသားစုတှေ အပျေါမှာ ပြျောရှငျမှုတှပေေးခငျြတဲ့ စိတျတှေ ရှိကွတယျ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ပုံစံမြိုးပမေဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကွောငျကွောငျ နိုငျတတျ ကွတယျ။ အလုပျလုပျ တဲ့နရောမှာသူမြားအပျေါဦးဆောငျလိုတဲ့ စိတျရှိ တယျ။ ကိုယျလုပျရငျ ကိုယျအကောငျးလို့ထငျမွငျ တတျကွတာ အင်ျဂါ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လညျး ကွိုးစားတတျကွတယျ။ အင်ျဂါတှဟော ကိုယျ့ကို … Read more
ရွှေ တိဂုံစေတီတော်အား ပူဇော်လိုလျှင်….
ရွှေ တိဂုံစေတီတော် ဘုရားရှိခိုး အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာ ၊ အောင်ဇေယျတည့်၊မဟာမုနိ ၊ တုမရှိလျှင် ၊ ဗောဓိညောင်ရွှေ၊ ပလ္လင်မြေမှ ၊ လှည့်ခြွေစိုးစံ ၊ သတ်ဌာနံတွင်၊ခက်လျှံညွန့်ဝေ ၊ လင်းလွန်းမြေဝယ်၊ နေစဉ်အခါ ၊ ဥက္ကလာမှ ၊ သမ္ဘာထူးလှ၊ တပုဿနှင့် ၊ ဘလ္လိကမောင် ၊ ညီနှင့်နောင်တို့၊ဘုန်းခေါင်ထံပါး ၊ ရောက်လာငြား၍၊ နှစ်ပါးမွှေးထုံ၊ သရဏဂုဏ်နှင့် ၊ ရှစ်စုံဆံမြတ်၊ သရီဓာတ်ကို ၊ ရလတ်သောခါ ၊ မင်းမြတ်စွာနှင့် ၊ ဒေဝါအများ ၊ မိုးသိကြားတို့ ၊ ကြိုးစားမယုတ် ၊ လွန်အားထုတ်၍ ၊ သိင်္ဂုတ်တောင်တွင်၊တိဂုံရှင်ကို ၊ ဖူးမြင်စေဌာ ၊ ဌာပနာ၏၊ ရှေး ခါရိပ်မြုံ ၊ … Read more
တဈယောကျယောကျကို အခဈြစဈနဲ့ ခဈြမိတဲ့အခါ ဖွဈလာမယျ့ လက်ခဏာရပျမြား…..
တစ်ယောက်ယောက်ကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါ ဖြစ်လာမယ့် လက္ခဏာရပ်များ ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အချစ်ကို ကြုံဖူးရတတ်ပါတယ်။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကို ချစ်မိပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ သူ့ရဲ့ အကြောင်း မတွေးဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတာ မရှိတာမျိုးပေါ့။ စိတ်ကစားဖို့၊ ရင်ခုန်ဖို့ဆိုတာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရာတွေ ဆိုပေမယ့် အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိဖို့ဆိုတာတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကိုယ် ချစ်မိတဲ့သူက ကိုယ့်ကို ပြန်ချစ်သည် ဖြစ်စေ၊ ပြန်မချစ်သည် ဖြစ်စေ အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီလက္ခဏာရပ်လေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ (၁) စိတ်မပျက်နိုင်ဘူး တကယ့် အချစ်စိတ် ပီပီသသနဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါမှာ ကိုယ် ချစ်ရသူက ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ စိတ်ပျက်လို့ မရဘူးဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေ ရှိနေလည်း၊ သူ့မှာ … Read more
တျောသလငျးလမှေးဖှားသူမြားအတှကျ တဈသကျတာ ဟောစာတမျး…
တျောသလငျးလတှငျမှေးဖှားသူမြား ပငျကိုယျသဘာဝအားဖွငျ့အတှေးအချေါဉာဏျပညာထကျမွကျသျောလညျးစိတျမငွိမျစိတျမွနျလှနျးတတျတယျစိတျခံစားခကျြ ပွငျးထနျသူမြားဖွဈသညျ။အစစအရာရာစဉျးစားပွီးပွုမူ၊ နထေိုငျလုပျကိုငျတတျကွသညျ။ဘဝတှငျလူခဈြလူခငျမြားသညျ အနုပညာဝါသနာကွီးသညျ။မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတို့ကို ခငျမငျတှယျတာတတျသညျ။ လှတျလပျမှုကို အလှနျကွိုကျသညျ။ စညျးကမျးဘောငျတှကေိုအလှနျမုနျးသညျ။ ဘယျတော့မှ မလိမျတတျ၊ မညာတတျသူမြားဖွဈသညျ။ စိတျထိခိုကျလှယျသညျ။ တဇှတျထိုးလုပျခငျြတတျသညျ။ဘယျအခကျအခဲကိုမှ နောကျမဆုတျ၊ နောကျမတှနျ့တတျ။ မွငျ့မွတျသောနှလုံးသားပိုငျရှငျမြားဖွဈသညျ။သို့သျောနှလုံးသားခံစားခကျြကိုဦးစားပေးလှနျးသညျ။ ငှကွေေးမှအစအခှငျ့အလမျးကိုမကွညျ့စိတျခံစားခကျြကိုသာ အဓိကထား၍ ဆုံးဖွတျဆောငျရှကျတတျသညျ။ ကိုယျယုံကွညျရာကို ရဲရဲဆုံးဖွတျလုပျကိုငျတတျသညျ။သညျးခံနိုငျစှမျးရှိသညျ။ သို့သျော စိတျဆန်ဒစောသညျ။ကွာရှညျစောငျ့ဆိုငျးလုပျကိုငျနခွေငျးမြိုးကိုစိတျမရှညျကွသူမြားဖွဈသညျ။တျောသလငျးလမှေးဖှားသူတို့သညျ ဉာဏျပညာအမွငျ့မားဆုံး၊ အထူးခြှနျဆုံးသူမြားဖွဈသညျ။ (၁၂)ရာသီဖှားတို့တှငျ ဉာဏျပညာတှငျထိပျဆုံးကဖွဈသညျ။ ဖွတျထိုးဉာဏျအလှနျကောငျးသညျ အပွငျပနျးဘာသိဘာသာနတေတျကွပွီး အလှနျအကှကျမွငျသညျ။ထိုးထှငျးဉာဏျကောငျးသညျ။ ဘာသာစကားနှငျ့စာပအေသိပညာတို့တှငျအတိတျဘ၀ ပါရမီထူးသူမြားဖွဈသညျ။ ထကျမွကျသော ဉာဏျပညာကိုစနဈတကကြွိုးစားအသုံးခသြှားပါက ဘဝတှငျထိပျဆုံးသို့ရောကျနိုငျစှမျးအောငျ တျောကွ၊ ထကျကွသူမြားဖွဈသညျ။ကိုယျ့အစှမျးအစကိုသိဖို့၊ ကွိုးစားဖို့တော့လိုတယျ။ရိုးရိုးနှငျ့တညျတညျကွညျကွညျပွောဆိုလုပျကိုငျတတျကွသညျ။ထိုအသှငျသဏ်ဍာနျကပငျထူးခွားနတေတျသညျငှရှောတတျသညျ၊ ငှရှောကောငျးသညျ။ထို့အပွငျငှအေသုံးအစှဲစညျးကမျးကောငျးသညျ။ လောငျးကစားကိုဝါသနာသိပျမပါတတျကွပါ။သို့သျောစှနျ့စားဝံ့စှနျ့စားရဲတတျကွသညျဆုံးဖွတျပွီးကပုံအောပွီးလုပျဝံ့ကွသညျ။ ငှကေိုအထူးခြှတောသုံးစှဲတတျကွသညျအလုပျတှငျလညျးစညျးစနဈကောငျးကွသညျ။သူတဈပါးစိတျမဝငျစားသောအလုပျတို့ကို စိတျဝငျစားတတျကွသညျ။ ရိုးသားသူမြားကိုကူညီတတျကွပွီးသဒ်ဓါတရားကောငျးတယျ။စိတျဆိုးမပိါကခှငျ့မလှတျတတျကွ။ ဟနျဆောငျခွငျးကိုအလှနျမုနျးသညျ။ဉာဏျပညာထကျမွကျပွီး သိလှယျတတျလှယျတတျကွသညျ။ စာဖတျ၊ စာကကျြရာတှငျမွနျသညျ။သဘောပေါကျလှယျသညျ။ မှတျဉာဏျကောငျးမညျ။ စိတျဝငျစားရာကိုစှတျလုပျတတျကွသညျ။ ဘဝတှငျ စနဈတကကြွိုးစားသှားကထိပျဆုံးသို့ရောကျတတျသညျ။အခြို့ကိစ်စမြားတှငျ စိတျထကျစိတျကွီးပွီးမဟုတျမခံမာနရှိသညျ။အပွောအဆိုခြိုသာသညျ။ဘာမဆိုကိုယျတိုငျလုပျရမှ ကနြေပျကွသညျ စိတျကွီးသဖွငျ့ခကျထနျသလိုထငျရသညျ။ … Read more
မိနျးခလေးတှေ သခြောဖတျ ဒီခတျေမှာ မိနျးကလေးတဈယောကျ မွတျမွတျနိုးနိုးနဲ့ အခဈြခံရဖို့ ဆိုတာ ရှားသှားပွီ။ မခူးရကျတဲ့ ပနျးလေးတဈပှငျ့ကို အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ထိုငျကွညျ့နသေလို မွတျနိုးမှုမြိုးနဲ့ ခဈြဖို့ဆိုတာ ဟာသ တဈပုဒျလိုတောငျ ဖွဈနပွေီ။ ရညျးစားထားတာ အလှထိုငျကွညျ့ပွီး ဘာလုပျရမှာလဲ။ ကိုယျမစားလညျး သူမြားစားမှာပဲ ဆိုတာတှကေ ပါသေးတယျ။ သူမြားသုံးပွီးသား ညဈနှမျးနတေဲ့ ပုဝါလိုမြိုး အရငျလူနဲ့ ဖွဈခငျြတိုငျးဖွဈခဲ့တာကို တနျဖိုးကွီး ပစ်စညျးလို တနျဖိုးထားနလေညျး အလကားပဲ ဆိုတဲ့ လူတှနေဲ့… ဒီလိုခတျေထဲမှာ မိနျးမဖွဈရတာ လူသုံးကုနျ ပစ်စညျးတဈခုလိုပဲ… ပိုကျဆံတတျနိုငျတဲ့သူတှကေ သူတို့လိုအတ်တကို ပိုကျဆံပေးပွီး ဝယျတယျ။ တမငျ ယုတျမာတဲ့သူတှကေ အခဈြဆိုတာကို အသုံးခပြွီး ကိုယျလိုခငျြတာကို ရအောငျယူတယျ၊ ကတိတှပေေးတယျ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပေးတယျ၊ တဈဖကျမိနျးကလေးရဲ့ အနာဂတျတှကေို အိပျမကျတှပေေးပွီး … Read more
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံး နေ့ကို ပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ ပြောရမယ်
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ပြောရမယ်။“အဘိုးကြီးက ကျွေးသလောက်ငတ်တယ်” တဲ့မနက်စောစောဆိုရင် ကျုပ်က ဆာပြီ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဘဏ်ကိုသွားနိုင်တော့ ပင်စင်လေးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်၊ပိုက်ဆံလေးကိုင်ပြီး စားချင်တာ ဝယ်စားနိုင်သေးတယ်။ ခုတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာ ၂ နှစ်ကျော် သွားပြီ။ချော်လဲပြီးကတည်းက မထနိုင်တော့တာ ခုထိပါပဲ မိုးလင်းရင် ဗိုက်ဆာတယ်။ ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ဖြစ် သောက်ချင်တယ်။ပျော့တာလေးတွေပဲ စားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကျွေးတာ စားရမယ်။ ချေးများနေလို့မရဘူးလေ။ ကိုယ်က ရှာနိုင် ဖွေနိုင်တော့တာမှ မဟုတ်တာ။ “အဖေ … ရော့ဒီမှာ … စား”ဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးပဲ။ ပဲကြော်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဝါးနိုင်မှာလဲ။ မုန့်ဟင်းခါးကအခန့်မသင့်ရင် ဝမ်းသွားမယ်။ အိမ်သာကို ဖင်ဒယဥ့်တိုက်နဲ့ သွားရတဲ့ဒုက္ခက သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆီးအိုးကို တောင် ဆောင့်အောင့်နေကြတာ။“အဖေ ဘာလို့ မစားတာလဲ”“အဖေ ဗိုက်မဆာလို့ပါကွာ”“အဲ့ဒါဆိုလည်း … Read more
ဟင်းရွက်ရောင်းနေတဲ့ အသက်(၈၀) ကျော် အဘွားဆီကို အံ့သြသွားအောင် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ဟင်းရွက်ရောင်းနေတဲ့ အသက်(၈၀) ကျော် အဘွားဆီကို အံ့သြသွားအောင် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် ပရိသတ်အချစ်တော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တောင် ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ ချွန်တွန်း ပရဟိတ အဖွဲ့နဲ့အတူ လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိမ်တွေကို ငှားရမ်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုလည်း ကိုဗစ်ကာလမပြီးမချင်း အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက လေးစား ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြတာပါ ။ လတ်တလောမှာလည်း ပရိသတ်တွေ ကြည်နူးသွားစေမယ့် အလှူဗီဒီယိုလေး တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ကန်နဖော့တွေ ခူးပြီး ရောင်းချနေရတဲ့ အသက် (၈၀) ကျော် အဘွားအိုကြီးဆီကနေ ဟင်းရွက်တွေကုန်ဝယ်ပြီး အားပေးခဲ့တဲ့အပြင် နောက်ဈေးထပ်ဈေးမရောင်းတော့ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနေဖို့အတွက် အလှူငွေ တစ်သိန်း ကျပ်တိတိကိုလည်း လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒိန်းဒေါင်က … Read more
ယောကျာ်းလေးတွေ လုံးဝ လက်မခံနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူပုံစံများ……
ယောကျာ်းလေးတွေ လုံးဝ လက်မခံနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူပုံစံများ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ချစ်သူဖြစ်တာက အင်မတန်ကို လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူဖြစ်ပြီးသွားရင် ရေရှည်တည်မြဲဖို့က အင်မတန်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ကယ်လက်တွေ့တွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မကြိုက်တဲ့ အချက်တွေ များနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်နဲ့လက်တွဲမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူပံစံတွေဟာ ရေရှည်မှာ ကိုယ်နဲ့ တစ်ကယ်အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာကို သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ အခုပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို မိန်းကလေးပုံစံမျိုးတွေ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်လိုအပြုအမူတွေကို မကြိုက်ဖူးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မိတ်ကပ်အရမ်းကြီး ပြင်လွန်းရင် မကြိုက်ကြပါဘူး။ သာမန်ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော်လေး ပြင်ထားရင်တော့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး လိုတာထက် ပိုများသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ အဲဒီလိုပုံစံကို လုံးဝမကြိုက်ကြပါဘူး။ … Read more